သတင်း - Dayu Irrigation Group ၏ 2021 နှစ်ကုန် လုပ်ငန်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် 2022 အစီအစဉ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်လုပ်ငန်းခွင် အကျဉ်းချုပ်နှင့် ချီးမွမ်းခြင်း အစည်းအဝေးနှင့် 2022 စီမံကိန်း လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဤနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ "အကောင်းဆုံးစနစ်၊ အခိုင်မာဆုံးပုံစံ၊ အကောင်းဆုံးအသင်းနှင့် နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းပန်းတိုင်ကို ပြတ်သားစွာ ပြီးမြောက်ရန်" ဖြစ်သည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် နှစ်စဉ်အဆင့်မြင့်စုပေါင်း ၁၄၀၊အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ထူးချွန်ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း ၁၄၀ ဦးအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ကာ ထူးချွန်ဝန်ထမ်းများအား ချီးမြှင့်သည်။ဂုဏ်ထူးဆောင် ပရောဂျက် ၃၀။ကုမ္ပဏီသည် အမျိုးသားကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးမူဝါဒကို တက်ကြွစွာ တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ဤညီလာခံတွင် အဖွဲ့၏ကဏ္ဍအသီးသီးနှင့် လုပ်ငန်းဌာနအားလုံးမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှတစ်ဆင့် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ညီလာခံကို နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြင့် ဖြည်းညှင်းစွာ စတင်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို အဖွဲ့၏ အမှုဆောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Yan Liqun မှ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတွင် Dayu Water Irrigation Group ၏ Party Committee အတွင်းရေးမှူး Wang Chong က "အဖွဲ့၏ စင်တာ/ဌာနများနှင့် ကုမ္ပဏီများ အတွက် 2021 ခုနှစ်အတွက် နှစ်ကုန်အမြတ်ငွေဆုများ ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်" ကို ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu မှ ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့သည် "ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်" ကိုဖတ်ပြပြီး "2021 ခုနှစ်အတွင်း အဆင့်မြင့်စုပေါင်းမှုနှင့် အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်" ကို Group ၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌ Yan Liqun က "2021 နှစ်ကုန်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ အကဲဖြတ်ခြင်းရလဒ်များ။
ကဏ္ဍအသီးသီးမှ အကြီးအကဲများက ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုရာတွင် ဦးဆောင်သည်။
ပစ်မှတ်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားအပြီးတွင် အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းယူနစ်တာဝန်ခံတို့သည် ကြေညာချက်ထုတ်ကာ 2021 ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြီး 2022 ခုနှစ်အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို စောင့်မျှော်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Xie Yongsheng
အုပ်စုကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုယ်စား Dayu Irrigation Group Co., Ltd. ၏ဥက္ကဌ Xie Yongsheng သည် "ယုံကြည်မှုကို ခိုင်မာစေခြင်း၊ သတ္တိရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အတူတကွ အာရုံစိုက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် 2022 ပန်းတိုင်များအတွက် ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်ခြင်း" ဆိုင်ရာ အလုပ်အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ လုပ်ဆောင်စရာများ"၊ 2021 ခုနှစ်တွင် အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အကျဉ်းချုံ့ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ 2022 ခုနှစ်တွင် အလုံးစုံအလုပ်အတွက် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
2022 သည် နိုင်ငံ၏ "14 ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း" နှင့် Dayu ၏ "6 ကြိမ်မြောက် ငါးနှစ်စီမံကိန်း" အတွက် အဓိကနှစ်ဖြစ်ကြောင်း Mr. Xie မှ ထောက်ပြခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အဓိကအချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြရမည်၊ အဓိကအချက်များကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး အကောင်းဆုံးစနစ်၊ အခိုင်မာဆုံးပုံစံနှင့် အကောင်းဆုံးကို ဖန်တီးရမည်ဖြစ်ပြီး "ဖွင့်ထားသောရင်းမြစ်များနှင့် အသုံးစရိတ်လျှော့ချခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းနှင့် အမှန်တရားကို ထိန်းသိမ်းခြင်း" နှင့်အညီ ဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။Niu အဖွဲ့သည် နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်၏ အဓိကအချက်ကို ပြတ်သားစွာ ပြီးမြောက်စေသည်" ၊ မဟာဗျူဟာမြောက် အာရုံစိုက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စနစ်တည်ဆောက်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း၊ စျေးကွက်ပုံစံကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပရောဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များကို ဆက်လက်တိုးတက်စေခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် ပရောဂျက်များနှင့်အတူ အမှတ်တံဆိပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထူထောင်ခြင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အသင်းတည်ဆောက်မှုကို အားကောင်းစေပြီး သမာဓိလုံခြုံရေးစည်းကို ဂရုပြုပါ။နှစ်သစ်မှာ လူတိုင်းဟာ ရှေ့ကိုအမြဲတွေးပြီး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလမှာ အန္တရာယ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့၊ ရှေ့ကိုတိုးဖို့၊ ဗျူဟာမြောက်သန္နိဋ္ဌာန်ချပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး ခိုင်ခံ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ ကေဒါနဲ့ အလုပ်သမားအများစု စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း မစ္စတာ Xie က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ပါတီကော်မတီနှင့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်၊တာဝန်အသစ်များကို သရုပ်ပြပါ၊ စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်ကို ဖန်တီးပါ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်ကို ရရှိစေရန်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ပုံရိပ်သစ်တစ်ခု ဖန်တီးပါ။
အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Wang Haoyu
၎င်း၏မိန့်ခွန်းတွင် ဥက္ကဌ Wang Haoyu က ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်စား ယခုနှစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် Dayu အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။"အမြတ်အစွန်းအညွှန်းကိန်းများ" မိန့်ခွန်းတွင် ရှုပ်ထွေးပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သော ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မသေချာမရေရာသောအချက်များရင်ဆိုင်နေရသော 2021 ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့သည် အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားပြီး ရလဒ်ကောင်းများရရှိရန် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။2022 နှစ်တစ်နှစ်လုံးကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော ဆောင်ပုဒ်ကို အာရုံစိုက်ရပါမည်- ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် အသုံးစရိတ်များကို လျှော့ချရန်၊ အမှားများကို ဖယ်ရှားကာ အမှန်တရားကို ထိန်းသိမ်းပါ၊ အကောင်းဆုံးစနစ်တည်ဆောက်ရန်၊ အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံနှင့် အကောင်းဆုံးအဖွဲ့ကို အာရုံစိုက်ကာ အလုပ်အား ပြတ်ပြတ်သားသား ပြီးမြောက်စေရမည် နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းလျာထားချက်။ရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကျေးလက်ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးကို ဦးစားပေးသည့် အမျိုးသားမူဝါဒဖြင့် တွန်းအားပေးပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အမျိုးသားဒေသနှင့် စက်မှုကွင်းဆက်တစ်ခုလုံး၏ ပကတိအားသာချက်အောက်တွင် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ရင်ဆိုင်နိုင်ကာ ခရီးသစ်ဆီသို့ ရွေ့လျားကာ ပိုမိုကြီးမားသော အကြောင်းရင်းကို ဖန်တီးကာ အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုကြီးကျယ်ခမ်းနားသော စံပြဖြစ်သည်။လူတိုင်းကို စိတ်အားထက်သန်ပြီး သတ္တိရှိရှိ၊ ကြိုးစားပြီး အလျင်စလိုလုပ်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကုမ္ပဏီနှင့် လက်တွဲပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရလဒ်များကို မျှဝေကြမည့်သူများ ပိုမိုများပြားလာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
အုပ်စုပါတီအတွင်းရေးမှူး Wang Chong
ညီလာခံအပြီးတွင် Dayu Irrigation Group ၏ ပါတီကော်မတီအတွင်းရေးမှူး Wang Chong က "ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို စီးနင်း၊ လှိုင်းများကို ချိုးဖျက်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် တည်ငြိမ်ပြီး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်း" ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော မိန့်ခွန်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ” .အတွင်းဝန် Wang Chong က နှစ်သစ်ကူး အလုပ်အစီအစဥ်အတွက် လိုအပ်ချက် သုံးခုကို တင်ပြခဲ့သည်- ၁။ အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ၊ အလုပ်ကြိုးစားပြီး အလုပ်အမျိုးမျိုးတွင် အခြေအနေသစ်တစ်ရပ် ဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းပါ။2. အပြင်အဆင်ကို ရေးဆွဲပါ၊ စျေးကွက်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးတကြီး ခံစားချက်ကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပါ။3. ကုမ္ပဏီ၏ ခမ်းနားသောအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် စိတ်၊ အမြော်အမြင်နှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် အခြေအနေအားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပါ။အတွင်းဝန် Wang Chong မှ ဝန်ထမ်းများအများစုသည် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်မှုကို ခိုင်ခံ့စေကာ အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကာ ၎င်းတို့၏ ရာထူးများတွင် ရပ်တည်သင့်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ညွှန်းကိန်းများအားလုံးကို 2022 ခုနှစ်တွင် အပြည့်အဝပြီးမြောက်စေရန်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လူတိုင်းသည် တိုက်ပွဲတွင် အနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိခြင်းစိတ်ဓာတ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။အဆင့်အသစ်တစ်ခုယူပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စရာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးလေးဖြစ်ပါစေလို့ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။